घरमा श्रीमती हुँदा हुँदै परस्त्रीलाई श्रीमती भन्न सक्ने केटाहरुको नियतप्रति घृ णा लाग्छ- सिम्रन भट्ट – Hamro Nepali Samachar
Home/ समाचार/घरमा श्रीमती हुँदा हुँदै परस्त्रीलाई श्रीमती भन्न सक्ने केटाहरुको नियतप्रति घृ णा लाग्छ- सिम्रन भट्ट
भनिन्छ मानिसको जीवनमा सुख दुख आउँछन् जान्छन् । मानिस सधै भरि सुखी पनि हुदैन् र दुखी पनि हुदैन् न अजम्बरी हुन्छ मान्छे त् नासिक हो । जिवनमा आएका आरोह अबरोह अनेक स्मरणीय यात्रा जुन मेरो लागि अझै कापी छन । मान्छेको जीवन पुर्ण छैन ।
मान्छे अनेको कुराको खोजिमा हुन्छ सन्तुष्टि कहिले हुन सक्दैन मान्छे । हिजोसम्म एक छाक टार्नको लागि दु:ख गरेर बसेको मान्छे दुई छाकसम्म पुर्याउछ।
अझै सन्तुष्टि हुदैन दिनमा सात पटक भोजन गर्नको लागि दौडिरहेको हुन्छ । असम्भव त केही छैन सम्भव छ । गोर्खा जिल्ला आरु चनौटेमा जन्मिएकी म । मध्यम परिवार त्यही माटोमा हुर्किए,कति पटक चिप्लिए,गाउँ कै स्कुलमा क ख रा पढे,मेलापात सकेसम्म गरे पनि । घरकी जेठी छोरिको रुपमा जन्मिएकी म मेरो छरछिमेक,आमाबुबा ,दाजुभाइ दिदिबहिनीबाट भने साथ सपोर्ट र अथाह माया अनि प्रेरणा पाएकी छु ।
सायद त्यसैले होला जता गए पनि मलाई मायाको कमि हुदैन । मान्छेको जीवन गतिशील छ । अनेक दु:ख,सुख झेल्दै बाचेको हुन्छ मान्छे ।
अनेक संघर्ष गरेर अगाडी बढेको हुन्छ मान्छे । स्कुल जीवन गाउँ मै बिताएकी म केही आशा अभिलास बोकेर २०६९ सालमा राजधानी छिरे म । म गाउँमा जन्मिएकी ,हुर्किएकी भएर होला सायद काठमाडौमा त्यति चाडैं घुलमिल हुन सकिन केही समय मलाई सकस भयो ।
एकले अर्कोलाई न चिन्ने ठाँउ रहेछ । एक घरमा मान्छे मरेर सोकमा डुबेको बेला संगैको घरमा बिहेको भोजमा रमाउन सक्दा रहेछ्न मलाई अत्यास लाग्न थाल्यो । सवै बिरानो लाग्यो एउटै घरमा कोठा पिच्छे फरक अनुहार देख्न थाले बोलचाल कमै हुन्थ्यो । सवै आफ्नो काममा दौडिरहेका हुन्थे त्यही बिचमा म एक्लै महसुस गरिरहेकी थिए ।
मेरो काम थिएन दिउँसो एक्लै बस्थे कोठामा दाइ भाउजू काममा जानुहुन्थो । बिस्तारै बुझ्दै गए काठमाडौ म मा पनि केही आशा पलायो मनमा । अरुले अफिस भनेको सुन्दा मलाई अनि अफिसको भुत चढ्यो । काम खोज्न तल्लिन भए । खोज्दै जादा काम पनि पाए ।
मलाई कामको केहि अनुभव थिएँन । सानो काम पाएसी म पनि त् अफिस धाउन थाले ।
सिम्रन भट्ट – ब्युटिसियन
बल्ल सिके मैले जिवनमा संघर्ष गर्न र जिवनको महत्व बारे । यात्रा गर्दै जादा अनेक थरीका मान्छे भेटाए मैले पाईला-पाईलामा सहयोग गरिदिने बाहानामा बाजि मार्ने दाउमा अनेक अंकुरा पालेर बसेका हुँदा रहेछन । मलाई एउटा पाठ सिकयो समयले सिक्ने र नितान्त नजिक भएर बुझ्ने मौका पाए मैले । छोरा मान्छेमा जति बाहिर हेर्दा चमक भलाद्मी देखिन्छन भित्र त्यो भेटाईन मैले सवै छोरा मान्छे गलत हुन भनेकी पनि हैन ।
मान्छेको विवेक हराईसकेको छ ।
छोरी मान्छे भेटाउने बित्तिकै गलत निहेतले आँखा गाड्ने छोरा मान्छेको चेतना कहिले आउँछ । मान्छेको मनमा माया दया हुन्छ तर पीडा पनि हुदोरहेछ । जबसम्म छोरा मान्छेको चेतना पलाउदैन तब सम्म छोरी मान्छेले उन्मुक्ति पाउदैन ।
समस्या नै समस्याले झेलिएको काठमाडौमा छोरी मान्छे बाच्न सजिलो भने छैन छोरा मान्छेको राक्षसी निहेत जबसम्म हटाउन सकिदैन तबसम्म म यात्रामा रहने छु कति छोरा मान्छे चिनिसकेकी छु कति चिन्ने अवसर कुर्दै अझै बसेकी छु ।
खबदार ! “छोरी मान्छे बिलासी र खेलौना हैन त्यही छोरी मान्छेबाट जन्मेका छोरा मान्छे दस धारा दूध चुसेर हुर्केका बिर्सेका हुन क्यारे ! ” घरमा श्रीमती हुदाहुदै पर स्त्रीलाई स्वास्नी भन्न सक्ने छोरा मान्छेको निहेत देख्दा मलाइ घृणा जागेर औउछ ।
छोरी मान्छे गलत कि छोरा मान्छे गलत ? गरिबी र बाध्यताको मौका छोपेर ताली बजाएर हिड्न सक्ने पनि भेटेकी छु । चिल्ला कुरा र एक कप चियामा बिकाउन खोज्ने छोरा मान्छेको निहेतलाई म चुक्न दिन्न चियो चर्चो गरेर बसेकी छु माफी गर्दिन ।
काम गर्ने सिलसिलामा धेरै हण्डर पनि खाए रमाए पनि देख्दा म जति खुसी छु खुसी देखेका छन चमक देखेका छन ममा तर पीडा च्यापेर बसेकी छु । छोरा मान्छे गलत हैन नियत गलत हो । मान्छेले मान्छे चिन्न छोडिसके सद्भाव छैन ।
बेला-बेला आत्तिन्छु म । मनमा अनेक कुरा खेल्छन अनि काउकुती लाग्छ । हिंस्रक पुरुषको अगाडि म भैदिएको भए त्यो नारी म भैदिएको भए म बदल्छु म बदलिन चाहान्छु । कानुन छ पालना हुँदैन । मेरो देश गरिब छ तर मान्छे गरिब छैन मेरो देशमा ।
मैले केहि सोच्न सकिन । एक छिन टोलाएर मैले भने दाईलाई के काम ? ब्युटिसियन सिक ? मैले भने कसले सिकाउछ । दाईले मज्जाले हासेर भन्नु भयो ” धत !लाटी,पैसा दिएर सिक्नु पर्छ भन्नु भयो । मैले हुन्छ भने त्यसपछि दाईले मलाई ब्युटिसियन क्लाससम्म लिनु भयो । मैले सिक्न सुरु गरे । दाईकै साथले मैले ब्युटिसियन सिक्ने अवसर पाएकी मैले केहि आगाडी बधिसकेकी थिए म । यो सिकिसके पछी मलाई NGO अफर आयो ।
एकछिन त मलाई त्यहाँको भाषा नजानेर न बुझेर अल्लमल्ल परेकी थिए । प्राय खेती कृषानी र मेलापात गरेर धनिएको त्यहाँको जनजीवन कहि कतै कठिन स्थिति पनि रहेछ । मेलापात घाँस दाउरा गरेकी बसेकी त्यताकी दिदी बहिनिको पीडा हेर्ने हो भने मन कुडिएर आउँछ ।
पुरुष नजिकैको देश भारत कामको सिलसिलामा मजदुरी गर्न जाने र दिदीबहिनी घर गृणी महिला घर धन्दा चलाएर बस्दा रहेछन । मेरो यात्रा कठिन रहयो तर जनिकैबाट बस्तीसङ्ग रुमल्लिन पाउँदा खुसी नै थिए ।
अतिनै छुई-छुई गर्ने त्यो समाजमा अलिकता अन्धोविश्वासको जरा भने पक्कै गाडेको रहेछ । महिनावारी हुँदा पाँच दिन छुट्टै बस्नु पर्ने वाध्याता रहेछ । घरको आगन छेउमा खरले बेरेको सानो झुपडी सानो ढोका भएको घर हुदोरहेछ महिनावारी हुँदा बस्ने । कहिलेकाही त त्यो सानो त्यो घरमा मुस्किलले तीन जना अट्ने ठाउँमा सात जनासम्म बस्नु पर्ने बाध्याता रहेछ । एउटै भान्सामा खाना खान नहुने देउता रिसाउछन भन्ने मानसिकता बोकेको समाजमा कहिले चेतना आउछ्होला ।
पछिल्लो समय निर्मला हत्या काण्ड पनि जहाको त्यही छ । यसले पनि केही बिकराल ल्याएको छ । हुन त मलाई लाग्छ सुदुर पश्चिम कि महिला नै अभागी हुन जस्तो लाग्छ । साच्चै सरकारले केही गर्ने नै हो भने केही पहल चालिन्थ्यो होला । निर्दोषलाई दोषी बनाएर उठाउन सक्ने देशमा न्याय पाउँछन् भन्नू त बालुवामा पानी खन्याउनु जस्तै हो लाग्छ मलाई ।
दुख सुख त्यताको बसाई सकेर म राजधानी फर्किने पर्यात्न गरे । मनमा अनेक कुरा खेलाउदै बिदाबारि मागेर म गाडी चडिसकेकी थिए । फेरि आउनु है भन्दै रुमाल हल्लाउदै मलाई बिदाई गरे त्यहाँका दिदी बहिनीले । मन कुडेर म फर्किए । अनेक सम्भावना छन । अनेक अवसर छन तर राजनीति खिचातानीले जरा गाडेको छ त्यो ठाउँमा हुनत यो रोग देशै भरी छ । भावनाले जोडिएको साईनो कती गहिरो हुदो रहेछ। भेट्न जति सजिलो हुन्छ छुटन त्यसको तीन गुणा असहज हुदोरहेछ ।
जे छ त्यसैमा रमाउन सक्नु नै बुद्दिमानी हो जस्तो लाग्छ । गरिब भएर बाचे तर धनि भएर बाच्न पाएकी छैन । गरिवको पिडा,आशु र रोदन देख्न नसक्ने म धनि हुन् पनि चाहादीन । देशमा फोहोरी राजनीति खिचातानीले गाउ‘ठाउ‘,कुनाकन्दरा, बस्ने गरिबहरु झनै गरिब हु‘दैछन् ।
खाली आफ्नो पेट पाल्न र बच्चाबच्ची पढाउन भनेर विदेश छिर्नेबाहेक अरु केही विकल्प छैन उनीहरुको । विदेशमा पनि कैंयौं गरिबहरु ठगिने गरेका छन् । भनेजस्तो काम र भनेजस्तो तलब पाएका छैनन् उनीहरुले ।
कतिपयले त झनै काम गर्ने ठाउ‘ समेत नपाएर नारकीय जीवन बिताउन र खाली हात घर फर्किनेबाहेक अरु केही पनि गर्न सकेका छैनन् । मतभेद हैन,राजनीति खोल ओडेर बादसाह बन्न खोज्ने होइन । समान व्यवहारको भावना सृजना नगर्नु नै देश र समाजको लागि बेइमानी हो । यस्तै तानाशाही र बदमासीले आउने पुस्ताले के सिक्ने र के दिने ? सिम्रोन भट्ट बिउटीसियन ।